Ukhuphelo lwe-Gappx ye-Apk ye-Android [Fumana imali]-Luso Gamer
Ukuba ufumana ubunzima obukhulu ngenxa yokungaqeshwa kunye nokukhangela amathuba. Ke i-Gappx lelona thuba lihle labasebenzisi be-Android lokufumana imali entle ngoko nangoko. Uguqulelo lwamva nje lwefayile ye-Apk luyafikeleleka ukusuka apha.
Nangona uqoqosho lwehlabathi belusanda kakhulu ngokuhamba kwexesha. Ngenxa yokwanda kwezoqoqosho, abantu bafumana imisebenzi emihle kumacandelo abo anomdla. Nangona kunjalo, ukusukela ekuqaleni kuka-2020, umhlaba waqala ukufumana iziphumo zobhubhane.
Ngenxa yeengxaki zendyikityha, yonke imibutho ebandakanya amashishini okwenza imali iye yavala. Ngenxa yoku kudilika okukhulu, izigidi zabantu zaphulukana nemisebenzi yazo. Kodwa ngoku abaphuhlisi babuyile nale Android emangalisayo Isicelo sokufumana evumela abantu ukuba barhole ngoko nangoko.
Yintoni iGappx Apk
I-Gappx Android ngumthombo ogqibeleleyo we-intanethi owenza ukuba amalungu abhalisiweyo afumane imali entle ngoko nangoko. Khumbula ukuba ukufumana imali akufuni amava okanye amaxwebhu anxulumene nomsebenzi. Gqibezela nje imisebenzi elula kwaye ufumane imali entle.
Kule mihla ukufumana umsebenzi kunzima kwaye akunakwenzeka. Kuba ukudalwa kwemisebenzi kunye nomlinganiselo wentswela-ngqesho awunakulinganiswa nanto. Nangona imakethi isanda ngokwandayo, uninzi lwabemi basafumana intswela-ngqesho.
Enye yezinto eziphambili zokungaqeshwa ithathwa njengohlaselo lobhubhane. Emva kolu hlaselo lukhulu, iziko ngalinye lavalwa ngokusisigxina. Noosonzululwazi sele bezise amayeza okugonya emarikeni ukwenzela abantu.
Nangona kunjalo, uqoqosho lwehlabathi lufumana imo ephantsi. Kwimeko enjalo, amanye amashishini anxulumene nempilo aye akhula kwaye anika umsebenzi omkhulu. Ukongeza, inkqubo yengqesho ye-intanethi ikwabonisa ukubaluleka kweenkonzo ezinjalo kubomi bomntu.
ubungakanani 14 MB
umbhekisi GAPPX TECHNOLOGY CO., LIMITED
Igama lepakheji com.gx.app.gappx
Abafumana i-intanethi nabo babandakanyiwe phakathi kwabachaphazeleka kancinane. Kuba imfuno yemisebenzi ye-intanethi inyuke kakhulu emva kwengxaki yobhubhane. Izigidi zabantu sele bezixakekise kwinkqubo kwaye izigidi zisaziqhelanisa.
Abo balungileyo kubomi bokusebenza kwaye bafumana amava. Unokufumana kunzima ukufumana umsebenzi kwi-intanethi kuba intsimi ithathwa njengehluke ngokupheleleyo. Kungoko kuqwalaselwa intswela-ngqesho kunye nokuthuthuzelwa kwabantu, abaphuhlisi baqulunqa iqonga elitsha.
Ngoku abo basebenzisi bemfonomfono abangaphangeliyo abanokufumana ubunzima bokufumana umsebenzi. Unokufumana inzuzo elungileyo kwangoko ngaphandle kokulinda impendulo yenkampani. Nkqu nomvuzo sele kulula kangangokuba awufuni satifikethi samava.
Uninzi lwabaqalayo luyaziphepha iiplatifomu ezinjalo ngenxa yobuchwephesha obuncinci. Bakholelwa ukuba ngaphandle kobuchule akunakwenzeka ukwenza iinkonzo. Kodwa eneneni, ukusebenzisa iqonga kulula kakhulu kwaye akukho buchule buchwephesha bokusebenzisa.
Abasebenzisi be-Android bayacelwa ukuba bakhuphele ifayile ye-app kuqala. Emva koko yifake kwaye ubhalise kunye neqonga. Ngoku fikelela kwideshibhodi ephambili, khangela imisebenzi enikezelwayo. Landela izikhokelo, ugqibezele imisebenzi uchitha ixesha elininzi.
Khumbula imisebenzi ibandakanya ukubukela iividiyo, ukuFaka ii-Apps, ukuphonononga iinguqulelo zovavanyo kunye nokuchitha ixesha lokuhlola amaqonga. Ukuba une-smartphone ye-Android kwaye ukhangela ithuba lokufumana imali kwi-intanethi. Emva koko faka inguqulelo yamva nje ye-Gappx Khuphela.
Ukufakela i-app kunika amathuba okufumana imali.
Okokuqala, abasebenzisi bayacelwa ukuba babhalise eqongeni.
Ukubhaliswa inombolo yeselula inokufuna.
Akukho kubhaliswa kuyafuneka.
Fikelela kwideshibhodi ephambili kwaye ukhangele imisebenzi eyahlukeneyo.
Ukugqiba imisebenzi kuya kunika iingqekembe zegolide.
Iingqekembe ezifunyenwe kamva zinokuhlawuleka zibe yimali yokwenyani.
Kwiintengiselwano, inkqubo yokuhlawula egudileyo yongezwa.
Ujongano lwe-App lulula kwaye lusebenziseka lula.
Uyikhuphela njani iGappx App
Ngoku usetyenziso luyafikeleleka kwiVenkile yoDlalo. Nangona kunjalo, ifayile ye-app ibekwe kudidi oluthintelweyo. Oko kuthetha ukuba zii-smartphones ezifanelekileyo kuphela ezivumelekileyo ukufikelela kwifayile ye-Apk simahla kwiVenkile yePlay.
Abo basebenzisi beselula abangafanelekanga banokungakwazi ukufikelela kwifayile ye-Apk. Ke abo basebenzisi be-Android bafuna iqonga elikwi-intanethi eliyinyaniso. Oko kuvumela abasebenzisi ukuba bakhuphele ifayile ye-Apk ngokuthe ngqo ngayo nayiphi na imvume kufuneka bandwendwele iwebhusayithi yethu.
Iifayile ze-Android ezifikelelekayo apha ukuze zikhutshelwe zezendalo kuphela. Ngaphambi kokubonelela ngeefayile ze-Apk ngaphakathi kwecandelo lokukhuphela, sifaka ezo zingaphezulu kwee-smartphones ezahlukeneyo. Sikwafakela iifayile ezithile ze-app kwizixhobo ezahlukeneyo kwaye sifumene usetyenziso olugudileyo kwaye lukhuselekile.
Apha kwiwebhusayithi yethu, ezinye ii-apps ezahlukeneyo zokufumana umvuzo ziyafumaneka. Yeyiphi eyinyani kwaye ikwabonelela ngengeniso ye-intanethi. Ukujonga ezo zicelo nceda ulandele ii-URL ezikhankanyiweyo. Ezo zinjalo Nanovest Apk kwaye Fiewin Apk.
Ngoko awuphangeli kwaye ukhathazekile ngenxa yokunqongophala kwamathuba. Emva koko sicebisa abo basebenzisi be-Android bafake i-Gappx Apk. Oko kuyafikeleleka ukukhuphela ukusuka apha ngokucofa okukodwa simahla ngaphandle kwemvume.
iindidi ukonwatyiswa, apps tags Ukufumana iApp, Gappx, Gappx Apk, Gappx App, Gappx Khuphela Post yokukhangela